By နေပြည်တော် On အောက်တိုဘာ 25, 2020
ပြောင်းလဲသွားတယ်သောဆန္ဒပြပွဲများe နီဂျေrထာဝရ ia
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ရဲဆန့်ကျင်ရေးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများသည်အင်အားကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးအာဏာရှိသူများကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်ပတ်ကြာပြီးနောက်ဘီဘီစီဟူစာအယ်ဒီတာ Aliyu Tanko သည်သူဘာလုပ်နေသည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၌တည်ရှိ၏။
၏တစ် ဦး ကအစွမ်းထက်ရောစပ် သရုပ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာများကနိုင်ဂျီးရီးယားလူငယ်များအားနိုင်ငံ၏ရိုသေလေးစားမှုယဉ်ကျေးမှုကိုဖြိုခွဲနိုင်ခဲ့သည်။
#EndSARS hashtag သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှံ့သွားသည်နှင့်အမျှနိုင်ဂျီးရီးယားအထက်တန်းလွှာများ၏စိန်ခေါ်မှုလည်းရှိသည်။
ဂို့စ်၏လေးစားကြည်ညိုလေးစားရသည့်အိုဘား (သို့မဟုတ်) ရိုးရာအုပ်စိုးသူ၏နန်းတော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသည်ဤခံစားချက်ကိုပုံဆောင်သည်။
လူငယ်များသည်သူ၏ရာဇပလ္လင်ကိုဆွဲ တင်၍ သူ၏ပစ္စည်းများကိုလုယက်။ ရေကန်ထဲတွင်ရေကူးကြသည်။
မုန်းတီးသောရဲတပ်ဖွဲ့အထူးခိုးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (Sars) အားဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်မှာလူငယ်များသည်နိုင်ဂျီးရီးယားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသူများကိုဒေါသထုတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ décennies နှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုတောင်းဆို။
သမ္မတဟောင်း Olusegun Obasanjo က ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်လူငယ်များနှင့် ပတ်သက်၍“ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှုန့်စည်တစ်ခုတွင်ထိုင်နေကြသည်” ဟုသတိပေးခဲ့သည်။
သူ၏မှတ်ချက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တိုက်ကြီးကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အာဖရိကရှိလူ ဦး ရေသန်း ၂၀၀ နှင့်လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာအသက် ၂၄ နှစ်အောက်ဖြစ်သည်။
အလုပ်လုပ်သောအသက်အရွယ်ရှိသူအများစုသည်တရားဝင်အလုပ်မရှိပါ။ ကောင်းသောပညာရေးရရှိရန်အခွင့်အရေးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကအစိုးရ၏ကိန်းဂဏန်းများအရနိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာနေထိုင်ကြသည်။
သို့သော်လက်ရှိအာဏာရသူများသည်ကန ဦး အချိန်၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာအားနားလည်မှုလွဲမှားနေကြသည်ဟုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့်စာရေးဆရာ Gimba Kakanda ကဘီဘီစီကိုပြောကြားခဲ့သည်။
“ #EndSARS ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနုပျိုစေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘေးဥပဒ်နောက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြပြီး၊ ကုသ"သူကကြေညာခဲ့ပေ။
“ နိုင်ငံရေးအတန်းအစားရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာသိပ်ကိုနူးညံ့လွန်းနေပြီးဒီမကြုံစဖူးလှုပ်ရှားမှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့နှေးကွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားလုံးကိုဖယ်ထားလိုက်ခြင်းပဲ။ "
ဆန္ဒပြမှုသည်အစိုးရထံမှလိုက်လျောမှုများကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ ဥပမာ Sars ကိုဖျက်သိမ်းမည်ဟုကတိပေးခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတို့ကြောင့်နိုင်ဂျီးရီးယားလူငယ်များကိုယုံကြည်မှုရှိစေသည်။
ဆန္ဒပြမှုများစတင်အပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည်အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုတုန့်ပြန်နိုင်သည့် helpline တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်လိုအပ်နေသောသူများအားတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပြီးရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံကိုပင်စတင်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့ကိုလူနည်းစုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး၎င်းတို့သည်ဝင်ငွေမည်မျှရရှိသည်ထက်သူတို့တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားပုံရသည့်နိုင်ငံရေးသမားများအတွက်မဟုတ်ပါကနိုင်ဂျီးရီးယားသည်မည်သို့ပိုကောင်းနိုင်ကြောင်းဥပမာများအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။
သူတို့ကဆိုင်တွေပျက်စီးသွားတယ်၊ ဂိုဒေါင်တွေကို ၀ င်စီးပြီးထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုပစ်မှတ်ထားတယ်။
သို့သော်၎င်းတို့သည်ဘုံအကြောင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်ရှိမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမဆိုတိုင်းပြည်အနှံ့အပြားတွင်လှုပ်ရှားမှုပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်ကိုအချို့က“ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်များ” နှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုတည်းတွင်ထိုင်ရန်အခက်တွေ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
'' Buhari အချက်လွဲချော် ''
သို့သော်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခများသည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေကြောင်းသဘောပေါက်လာကြောင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Kakanda ကပြောကြားခဲ့သည်။
“ အစိုးရကဒီလိုအရှုပ်တော်ပုံကိုအရင်တုန်းကလိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတယ်” ဟုသူကဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
ကြာသပတေးနေ့ညတွင်သမ္မတ Muhammadu Buhari ၏တိုင်းပြည်ကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုသည်ဘလော့ဂ်နှင့်ဆောင်းပါးရှင် Japheth Omojuwa ၏ပြောကြားချက်အရ“ အဝေးကြီးကိုလွဲသွားပြီ”
ဘူဟာရီသည်ဆန္ဒပြမှုများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုစတင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း“ သူကနိုင်ဂျီးရီးယားကိုခြိမ်းခြောက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအစိုးရကဥပဒေအရအရေးယူဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာကြောင့်မှတ်မိကြလိမ့်မယ်။ ”
မည်သို့ပင်ဆိုစေ Mr Omojuwa မှ #EndSARS လှုပ်ရှားမှုသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
အထူးသဖြင့်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်ကလားဂို့စ်တွင်ဆန္ဒပြသူများကိုပစ်ခတ်မှုသည်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်အမှတ်ရနေလိမ့်မည်။
ခေါင်းဆောင်များကတိုင်းပြည်၏ငယ်ရွယ်သောလူ ဦး ရေကိုလျစ်လျူရှု။ မရ၊
၎င်းအဖွဲ့သည်သူမကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြမှုများကိုထောက်ခံအားပေးမှုနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယား၏အုတ်မြစ်များကိုဖြိုခွဲခဲ့သောအမည်မသိအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Feminist Coalition မှရရှိသောကြီးမားလှသောအလှူငွေများကြောင့်ထင်ရှားသည်။
မှ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲသည် politique ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေဟာသူတို့ဘယ်လောက်စွမ်းအားကြီးတယ်၊ ဘုံရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်အတူတကွစုစည်းတဲ့အခါသူတို့ဘာတွေပြီးမြောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုလူငယ်တွေသဘောပေါက်လာလို့ပါ။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.bbc.com/news/world-africa-54662986 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
! Al diablo las instituciones! - ဗီဒီယို
Brigitte Macron အတွက်ရှော့ခ်။ ဤsumရာမပေါင်းလဒ်သည်သူမအားသူမ၏တိုက်ခန်းများသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသည် လွန်ခဲ့သော4ပတ်က
[…] အဖြစ်မှန် Coronavirus သည်တိုင်းပြည်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ အစိုးရသည်အထွေထွေချုပ်နှောင်ခြင်းကိုအမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ A […]
xnxx - ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၌သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုထည့်သွင်းရန်မသင့်သောအချက် (၄) ခုရှိသည် လွန်ခဲ့သော4ပတ်က
[…] သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဘေးထွက်။ သို့သော်ကောင်းသောအရာ၏ရန်သူပါ! ပထမအချက်အနေနှင့်မည်သူမျှ emojis ကိုအနက်ဖွင့ ်၍ မပြုသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည် […]